Alayle Faroole Kuma Fiicnayn Fariinta Laga Keenay – Rasaasa News
Alayle Faroole Kuma Fiicnayn Fariinta Laga Keenay
Nov 1, 2009 ethiopia, Ogaden, Puntland, Somaliya
Ruuxa masuulka ahi kolka uu hadlaayo ama khudbaynaayo waa in uu dhawrsadaa, xitaa hadii ay dhab yihiin waxa uu sheegayaa, waayo musaqbalka siyaasadeed ee masuulka waxay ku xidhan codkiisa, Alayleh Faroole kuma fiicnayn fariinta laga keena
Waxaan dhagaystay hadal la yidhi waa khudbad uu Faroole jeediyey, waxaana ka mid ahaa erayada khudbada “Somalinimada waa loo siman yahay, laakiin waa lagu kala duwan yahay muwaadinimada” “Jamhuuriyada Somaliya, Somaliga degan waa muwaadiniin Somali ah, laakiin Somaliga ku nool meelaha ka baxsan xadka Jamhuuriyada Somaliya ma aha muwaadin Jamhuuriyada Somaliya” sidaas waxaa yidhi Faroolaha Puntland.
Dastuurka Somaliya waxaa uu odhan jiray “Ruuxa Somaliga ah meesha uu doono ha ku noolaadee waa muwaadin Somali ah”.
Waxaa dhab inta Somalida xaalkeedu sidan yahay in aanu xugun lahayn ruuxa kasta oo ka hadla arimaha la xidhiidha taariikh cusub iyo xidhiidh dalal lala galo, waayo wax walba waxaa ugu horeeya in uu dalka Somaliya noqdo dal jira.
Waxaa hore qadaf taariikheed u galay Geedi oo R/wasaare ka ahaa iskudaygii dawladnimo ee ay gardaadisay xukuumada Itobiya, waxaana uu yidhi “way dhamaatay taariikhdii been beenta ahayd ee u dhaxaysay Somalia iyo Itobiya”, waxaa dhab ah in ayna taariikhdu been noqon karin, laakiin kh ooilaaf colaadeed waa laga heshiin karaa, hadiiba ay u dhaxaysay Somaliya iyo Itobiya.
Waxaan aad ula yaabay su,aal uu Wariye Cabdisallaan Herari waydiiyey Jwxo-shiil, oo ahayd, waxaad gudoomiye u tahay garab Jabhada ONLF ah, ka horna waxaad ahay taliyaha ciidanka bada Somaliyeed, waxaadna gaadhay darajada Janan, marka ma Somali baad tahay mise Itobiyaan maxay tahay dhalashada aad haysatid? wuxuu ku jawaabay in uu yahay askari Somaliyed uuna dhalasho ahaan Somali yahay.
Waxaan hubaa, hadii la weydiin lahaa hogaamiyeyaalkii horseedka ka ahaa maba,adiida ONLF, in ay kaga jawaabi lahaayeen su,aashaas “Ogadenian”. Waxaa dhibaato ah in uu ruuxu garanwaayo waxa uu yahay, saraakiishii hogaamin jirtay ururka ONLF, waxay ku doodi jireen, halganka Ogaden, waxaa uu u baahan yahay in laga xoreeyo Somaliya oo hanaan khaldan ka fahamsan Ogaden iyo Itobiya oo iyadu u baahan xabad laggaga xoreeyo Ogaden. Si ay arintaas u hirgaliyaan waxay dalalka reer galbeedka oo ay qaxootinimo ku joogeen ka dalbadeen in aan la xaqirin wax ay yihiin waxaana loo ogolaaday in baasabooradooda loogu qoro “Ogadenian”.
Hadaba, waxaan ugu raacsanahay hadalka uu yidhi Faroolaha Puntland oo aan inaba wax laxni ah ku jirin, waxaan aad ula yaabanahay boggaga Internetka ee ka soo jeeda Somalida Ogaden ee la yaaban hadalka Faroole ee buun buuninaya sidii isaga oo si gaar ah khalad uga galay dadeynaha degan labada gabal ee NFD iyo Ogaden. Waxaad moodaa in uu dadkan qabanayo qodob aan xalay qoray oo odhanayey “dadka degan gabalka NFD, hadii la weydiin lahaa ma somali baad raacaysaan mise Kenya waxay dooran lahaayeen Kenya”.
Ummada Somalida Ogadeeniya, hadalka Faroolaha Puntland umma ah wax dhimaal, Inta degan dhulka Somalida Ogadeeniya ee hoos jooga maamul Itobiya way ku khasban yihiin in ay qaataan dhalashada Itobiya, inta aan joogin ee ku nool dalalka dariska iyo dibadaha fog fog waxaa ay la mid yihiin dadyoga gumaysiga ku jira kolban dalka ay saaxiibtinimo ka dhaxayso ay Dukumintigiisa qaadan. Laakiin dhalashada ay ku doodaani waa meel kasta oo ay joogaanba “Ogadenian”, xitaa Itobiya dhaxdeeda ayaa warqadaha dhalashada loogu qoraa.
Jwxo-shiil, halgan bi,iye wax alaale wax laga qori ma jiraan, sababta oo ah, ma ba aaminsana shuruucda Ogaden lagu maamulo ee ay Jabhadu si ku meel gaadh ah, ku wado inta laga helayo dawlad dhalata xornimada ka dib.
Daweynaha Somalida Ogadeeniya, waxaan u sheegi lahaa dal weyn baad leedihiin, gumaysiguna kaligiin idinma haysto,sidaas daraadeed yeyna idin damqin hadalada masuuliyiinta Jamhuuriyada Jabtay ee Somaliya, oo hadii ay cid wanaag u samaynayaan u samayn lahaa dadweynahooda.
Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], Looma Dhisin in ay la Dirirto Ummada Somaliyeed
Jwxo-shiil: Dad waxaan Ugu Jeclahay, Habraha Buufisku Dilooday ee in ay Hadalka Dhagaystaan Jecel oo ay Taydu Ugu Horeyso